Mid Ka mid ah Qoraaladii ugu danbeeyay ee Allaha u Naxariistee, Cabdishakuur Mire. IIBIYIHII WARGAYS-YADA MUQDISHO.!! | Codka Shacabka Soomaaliyeed
Dhag jalaq uma siin ..w axaan ka iibiyey ilaa tobon Joornaal oo ka koobnaa wargaysiyadii kala duwanaa ee uu gacma ku sitay…. Markaas ayaa la igu soo yaacay oo qof walbaa damcay inaan siiyo… waan u diiday oo wiilkii lacagtuu ii sheegay laba laabkeed waxaan ugu diray EVC Plus ……
Gaar ayaan u waraystay oo ku iri maxaa cabaysaa…. Adeer maya… meeshani waa qaali kama cabayo…. Anigaa bixinaya ayaan ku iri…. ee magacaa … Intuu kursi banaana oo iga yara durugsanaa fariistay ayuu dal baday Koob shaah ah. Aniguna raggii aan la fadhiyey intaa ku soo kacay ayaan ku biiray isagii..
Adeer magacaa ayaan weydiiyey.
Haa… Wiilkayga ayaa la magac tahay…
Intee la dhahaa Bosaso…
Waqti ayey igu qaadatay wiilkaa da’diisu u dhexeyso 10-12 inan u sheego halka ay tahay Bosaso.. Waxaa ii muuqatay inay Somali sii kala irdhoobayso oo derbiya badan u dhexeeyaan…. Laakiin wiilkan ma oga in raggii aan la fadhiyey tuhunsan yihiin oo xagiisa dareen ka qabaan… wuxuu ii sheegay inuu iskuul galabtii dhigto.. Aabihii uu yahay da’ada 35 jir qiyaasitiisa uuna gaari gacan kaga xamaasho Suuqa Bakaaraha … Hooyadiis oo uu curud u yahay ay reeraha dharka u soo dhaqdo.. Caruurta qoyskoodana uu ugu yar yahay ilma 6 bilood jir ah……
Shaaha aan cabay meeqa waaye ayuu i weydiiyey… Waxaan ku iri waa hal dollar… Edebkay Shaah hal dollar ah ma cabin…. Waa yaabay.. waxaan ku iri maalintii meeqa heshaa markaad wargayska iibiso .. waxay ku xiran tahay sida la iiga iibsado…. Ok .. adeer ayaan ku iri subax walba 10 Joornaal ii keen anigaa kaa iibsanaya…. Sidaas ayaan ku balanay…
Cabdiraxmaan Yare waa mustaqbalkii Soomaaliya waa jiilkii berito nolol adag ayuu ku jira, wuxuu nasiibka u helay isagu ma doorane in qoyskiisu ka mid noqdo dadka Soomaaliyeed ee Soomaalida ah ee dhibaatadu ku dhex hayso… Ayaa ka fekeray Mustaqbalkiisa. Ayaa ka warqaba.. Ayaa og…. Ma la oran karaa maanta haddii laga tala gelin lahaa inuu cid noqdo inaanu doorteen Soomali.. Ilaah ayaa u qadaray inuu Soomaali noqdo.
Wax walba waxaa aniga iiga yaab badnaa in Cabdiraxmaan Yare laga shakisanaa iska daa in loo garaabee… Hadalka ayaa u badnaa armay muluqshoodhinkii ( Shabaab)soo dirsadeen. Inta badan Hoteelka aan joogay waxaa hadba dhinac ii dhaafayey Xildhibaano xiiqsan oo iska soo horjeeda oo kala taageersan Madaxda Qaranka ugu sareeysa ee is khilaafsan.
Caruurta Xildhibaanadu dhaleen intooda badan ma joogaa dalka gudihiisa… Qurba joogta dalka u soo shaqa tagtayna maba danaynayaan Caruurtaan Soomaaliya joogta oo xoogsatadii Khallijka u shaqa tagi jirtay oo kale.
Inta la midka ah Cabdiraxmaan Yare ee Caruurta Soomalaiyeed ee ku nool gudaha Soomaaliya iyo xeryaha Qaxootiga waa ciil qabaan markay qaan gaaraan waxaan hubaa inay samayn ku yeelan doonto noloshooda dhibaatada nafsiga ah ee ay ku jiraan… Ma la naawil doonaa hadaan qorshe iyo dawlad ka fekerta jiilka soo koraya la helin .. Maanta cabsi ayaa jira…. Laakiin maxaa la samayn doonaa marka kooxo Maafiya ah , Kuwa Daroogada ka ganacsada…. Gang dadka baad ka qaada ….
Cabsida aan qabaa ma ahan maanta… Waayo muqdisho xataa ma arkaysid cid isku dayi karta inay Telfonada qaaliga ah ee aad gacanta ku wadato. halka magaalooyinka kale ee Geeska Afrika oo barqo cad lagu boobayo…..
10 sano ka dib Cabdiraxmaan yare haddii Ilaah daayo waa ka weyn yahay 20 sano…. Hadaan laga sii fekerin isaga iyo inta la mid ka ah ee Soomalinimada ay yihiin u eersanaya nasiib darada ku dhacday maxaa laga filan karaa ?
Sawirka wiilka Wargayska iibinaya ma ahan Cabdiraxmaan yare oo degan xaafad ka yara durugsan Bartamaha magaalada wuxuu ka baqay aminigiisa . waxaase hayaa sawir aan aniga iyo isagu si gaar ah u galay… Sawirkaan waa tusaale
Muqdisho waa la isaga garaabaa cabsida.
« Wasiiradda Waxbarashada DFS oo sheegtay in qaabka waxbarashada dalka loo maamulo ay wax weyn iska bedeli doonaan iyo wareysi aan arintaas ka wareysannay Agaasimaha waaxda waxbarashada G/Banaadir.
Wareysi dheer oo uu Agaasimaha Waaxda Waxbarashada G/Banaadir siiyay idaacadda Maandeeq. »